संघीय कानुनअनुसार सेवा समूह छुट्टिने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ तर परराष्ट्रले आफ्नो अनुकूल अर्कै कानुन बनाउँदै छ । त्यो जरुरी पनि छ । उता, कानुन मन्त्रालयका हाकिमसमेत भिन्दै योजनामा रहेको बुझिएको छ । उनीहरू छुट्टै सेवा ऐनको तयारीमा लागेका छन् । जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्षको छ । सर्वोच्चकाले त झन् ६५ वर्षसम्म मुद्दा छिन्छन् । यसो भएपछि न्याय सेवावाला आखिर… विस्तृत समाचार
​गाउँ, शहरबाट सिंहदरबार हाँक्न खोज्नेहरू
जनतालाई घरमै सिंहदरबार ल्याइदिएको भन्दै प्रचारित स्थानीय तह जनप्रतिनिधिमार्फत शासन हुने दिन नजिकिएको चर्चासँगै त्यो घरछेउकै सिंहदरबार हाँक्न रहर गर्नेहरू बढ्दो गतिमा छन् । केन्द्र सरकारको राजधानी र मन्त्रीक्वार्टर रहेको ललितपुर जिल्ला नेताको झगडाका कारण ६ स्थानीय तहमा सीमित भएको छ । ०१५ सालदेखि ०६४ सम्म वामपन्थीले जितेको ललितपुर ०७० को निर्वाचनमा ३ वटै क्षेत्र लाने कांग्रेसमै स्थानीय निर्वाचनमा पनि टिकटका लागि सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा… विस्तृत समाचार
​दूधबाट पैसा दनादन
जम्मा ५० पैसाको कुराले राजधानीका बासिन्दा गुणस्तरहीन र बासी दूध पिउन बाध्य छन् । कमिशन विवादका कारण दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई दूध संकलकहरुले दूध दिने क्रम घटाएका छन् । फलतः दूधको कलेक्सन कम भएको छ । किसानबाट दूध नआएर संस्थानले निजी डेरीसँग किन्नुपरेको छ । संस्थानसँग पाउडर दूध पनि छैन । दूधमा फ्याट मिलाउने बटर आयल सकिएको छ । यो कारण घ्यूको उत्पादन प्रभावित भएको… विस्तृत समाचार
मोटो मान्छेको यसरी दुख्यो मन
‘मलाई केही चाहिया छैन, कसैलाई केही दिनु पनि प¥या’छैन । तर, व्युरोक्रेसीको सिस्टम बिगारेर एउटा सिन्को पनि भाँच्न दिन्नँ !’ सभामुख ओनसरी घर्तीमगरसँग यसरी सोझासोझी शैलीमा बम्किए, संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई । ४० लाखका दरले २० वटा सुविधासम्पन्न सवारी साधन सट्याकसुटुक कागजात मिलाएर आठ करोड ४० लाख माग गर्दासम्म भट्टराईलाई केही थाहा रहेनछ । तर, जब अर्थबाट १८ सवारी साधन खरिदका लागि सात करोड… विस्तृत समाचार
मिलाएर गर्न निवासमै मन्त्रणा
‘सर्वोच्चमा मेरो विरुद्ध परेको मानहानी मुद्दा के हुन्छ यार ?’ एउटा शेरबहादुरको अर्का शेरबहादुरलाई प्रश्न । नेपाल बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अस्ति सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहान यस्तो जिज्ञासा राख्दा महासचिव खम्बबहादुर खाति पनि सँगै थिए । ‘एक रूपैयाँमात्र दण्ड तिराए पनि राम्रो सन्देश जाँदैन सभापतिज्यू’, वकिलहरूले सुझाए । ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले दिएको फैसलाउपरको असन्तुष्टि स्वरूप पार्टीबाटै निर्णय गराउनु हुन्थेन ।’ वकिलहरूले… विस्तृत समाचार
मोदीको रोजाइले दिएको नेपालमन्त्र
भारत उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथले शपथ लिइरहेका बेला अघिल्लो आइतबार हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न भन्दै राप्रपाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । २२ करोड जनसंख्या भएको भारतको सबैभन्दा ठूलो उत्तरप्रदेश हामीसँग सीमा जोडिएको प्रमुख प्रदेश हो । आदित्यनाथ नेपालबारे धेरै जानकार पात्र हुन्, जसले गोरखपुरस्थित मन्दिरको महन्थ रहँदैदेखि कैयन नेपाली राजनीतिक र साँस्कृतिक पात्रसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । यतातिर उनको कनेक्सन जति लामो छ,… विस्तृत समाचार
स्थानीय निर्वाचन हुने नहुने अलमलमा परेका राजनीतिक दलले आन्तरिक क्रियाशीलतालाई भने ह्वात्तै बढाएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा धेरै अलमलमा परेको देखिन्छ । कांग्रेस झन् सुस्त छ । एमालेले गाउँ, नगर र टोल–टोलमा कार्यक्रम गरिरहेको छ ।' एमालेभित्र उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्दै बागीसम्मलाई ठेगान लगाउने तयारी गरिए पनि वर्ष दिनपछि सोमबार मात्रै काभ्रे जिल्ला कमिटीको बैठक बसेको छ । त्यो पनि… विस्तृत समाचार
​राति–राति यस्तो देखिन्छ राजधानीमा
कांग्रेस क्षेत्र नं. ४ मा जब गगन थापाका उम्मेदवार न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठसँग ४ मतले पराजित भए तब गगन र राजुबीच पानी बाराबारको स्थिति आयो । गगनलाई क्षेत्रको कुनै कार्यक्रममा राजुले बोलाएनन् । यी दुईबीच दुस्मनीको फाइदा कांग्रेस कपनका पूर्वसभापति राजाराम बुढाथोकीले लिए । बुढाथोकीले भूकम्पताका गगनको मौखिक पिएका रूपमा काम गरेका थिए । भूकम्पताका गगनले त्रिपाल वितरण र विकास निर्माणको काम यिनैलाई लगाएका थिए… विस्तृत समाचार
​बिजोग छ हजुर यसरी बस्नेको
देश र जनताका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मीको बास धर्मशालामा छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला । एउटा मालदार र सुविधासम्पन्न अड्डामा बसेका सुरक्षाकर्मी वर्षौंदेखि धर्मशालामा रात बिताउन विवश छन् । प्रसंग हो, सुदूरपूर्वी नाका काँकडभिट्टाको । मेची भन्सारलाई सहयोग गर्ने एक मात्र सुरक्षा निकायका रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्ममा डिएसपीको कमाण्डमा ७५ जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ । तर, लामो समयदेखि उनीहरू… विस्तृत समाचार
​कस्ता–कस्ताले पाए काम ?
तीन हप्तासम्म कार्यालय प्रमुखविहीन बनेकोे राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीमा सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्रका निर्देशक डा.शरच्चन्द्र बर्मालाई ल्याइएको छ भने क्षयरोगबारे शून्य ज्ञान भएका बालरोग विशेषज्ञ डा.आरपी बिच्छालाई ८ देश संलग्न रहेको सार्क क्षयरोग केन्द्रको प्रमुख बनाइएपछि विरोध शुरु भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि स्वास्थ्य निकायमा १० वर्ष काम गरेको वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ मात्रै सार्क क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक बन्न पाउने नियम सन्… विस्तृत समाचार